စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပညာရေး in ၾသစေတးလ် သြစတြေးလျတွင်ပညာသင်လိုသောကျောင်းသားများအတွက် တက္ကသိုလ် of ၾသစေတးလ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမှတဆင့် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ၾသစေတးလ်လည်းအဖြစ်လူသိများ, သြစတြေးလျရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ၾသစေတးလ် ကျောင်းသားများအတွက် ပြည်ပမှာလေ့လာမှု in ၾသစေတးလ်အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပညာရေး in Melbourne သို့ လေ့လာချက် in Melbourne in တက္ကသိုလ်က of Melbourne ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Melbourne ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Melbourne ပညာရေး in ဘရစ္စဘိန်း သို့ လေ့လာချက် in ဘရစ္စဘိန်း in တက္ကသိုလ်က of ဘရစ္စဘိန်း ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဘရစ္စဘိန်း ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဘရစ္စဘိန်း ပညာရေး in Perth သို့ လေ့လာချက် in Perth in တက္ကသိုလ်က of Perth ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Perth ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Perth ပညာရေး in ဆစ်ဒနီ သို့ လေ့လာချက် in ဆစ်ဒနီ in တက္ကသိုလ်က of ဆစ်ဒနီ ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဆစ်ဒနီ ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဆစ်ဒနီ.
အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in သြစတြေးလျ | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in Melbourne | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ဘရစ္စဘိန်း | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in Perth | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ဆစ်ဒနီ
ပညာသင်နှစ် (ဖေဖော်ဝါရီ - ဖေဖော်ဝါရီ)
ၾသစေတးလ်, အီကွေတာ၏တောင်ဘက်ခြမ်း၌, အသေးဆုံးတိုက်ကြီးနှင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံများမှဖြစ်နိုင်သည်။ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေး system ကိုသြစတြေးလျတွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်.
သြစတြေးလျတွင်အင်္ဂလိပ်သည်သြစတြေးလျ၏တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပြီးပညာရေးစနစ်တွင်သင်ကြားရန်အဓိကဘာသာစကားဖြစ်သည်။ The သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင်ကျောင်းသားများအားလက်တွေ့ကျသောအတွေ့အကြုံများပေးရန်၊ ၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်သားအင်အားတွင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုနားလည်စေရန်ကူညီပေးသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏အရည်အချင်းသည်သြစတြေးလျား၊ အိမ်၌ဖြစ်စေ၊ The သြစတြေးလျပညာရေးအပိုင်း ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဆင့်မြင့်နည်းပြသင်တန်းများနှင့်ထူးချွန်သောကထိကများနှင့်ကျောင်းသားအုပ်ချုပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - သြစတြေးလျတွင်လေ့လာပါ
သြစတြေးလျတွင်ပညာသင်ကြားခြင်း သြစတြေးလျတွင်ရှိသောပညာရေး | Australiaစတြေးလျနိုင်ငံတွင်ပညာသင်ပါ
မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | ဘရစ္စဘိန်း၌နိုင်ငံခြားသို့ပညာသင်ပါ | ပါ့သ်တွင်ကျောင်းတက်သည် | ဆစ်ဒနီမြို့တွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | မဲလ်ဘုန်းမြို့ပညာရေး | ဘရစ္စဘိန်းပညာရေး | ပါ့သ်ပညာရေး | ဆစ်ဒနီရှိပညာရေး
သြစတြေးလျတွင်စုစုပေါင်းတက္ကသိုလ် ၄၃ ခုရှိသည်။ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ် ၂ ခု၊ သြစတြေးလျတက္ကသိုလ် ၄၀ နှင့်ပုဂ္ဂလိကအထူးတက္ကသိုလ် ၁ ခုရှိသည်။ သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်များအပြင်အခြားတက္ကသိုလ်များလည်းရှိသည်။
သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်များ ရွေးချယ်ရန်ကျောင်းသားများကိုသင်တန်းအမျိုးမျိုးပေးသည်။ စုစုပေါင်းသင်တန်း ၂၂၀၀၀ ကိုအဖွဲ့အစည်း ၁,၁၀၀ ကျော်၌သင်ကြားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆစ်ဒနီ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့၊ အက်ဒလိတ်ဒ်၊ ပါ့သ်နှင့်ဘရစ္စဘိန်းတို့အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးကျောင်းသားများအတွက်မြို့ကြီး ၅ မြို့ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာဘွဲ့: သူတို့ရဲ့ mode ပေါ်မူတည်ပြီး (အချိန်ပြည့်သို့မဟုတ်အချိန်ပိုင်း) ။ ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိကြာသည်။
ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်သင်တန်းများ သြစတြေးလျအဖွဲ့အစည်းများ သိပ္ပံ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူ့အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်နှင့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဆိုင်ရာဥပဒေများဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျားရှိတက္ကသိုလ်များသည်စီးဆင်းမှုအားလုံးတွင်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနေရာတွင်ရပ်တည်နေပြီး၎င်း၏ပညာရေးစနစ်သည်နယ်ပယ်အားလုံးတွင်သာလွန်သည်။
တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားရန်၊ ပညာရေးထောက်ပံ့သူ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှလျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါ။ သီးခြားလျှောက်လွှာပုံစံကိုတက္ကသိုလ်တစ်ခုထက် ပို၍ လျှောက်လိုသောကျောင်းသားများကဖြည့်စွက်ရမည်။
Australiaစတြေးလျတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | သြစတြေးလျရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် | သြစတြေးလျရှိနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်မှုစရိတ်
မဲလ်ဘုန်းတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ဘရစ္စဘိန်း၌နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ပါ့သ်တွင်နေထိုင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | ဆစ်ဒနီတွင်နေထိုင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်နေထိုင်သည် | ဘရစ္စဘိန်းတွင်နေထိုင်မှုနှုန်းတွက်ချက်မှု | Perth တွင်နေထိုင်ရန်တွက်ချက်မှုတန်ဖိုး | ဆစ်ဒနီတွင်နေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်
တက္ကသိုလ်က သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပညာရေး ကျောင်းသားသည်လွတ်လပ်သောသင်ယူသူဖြစ်လာစေရန်ကူညီပေးသောပြproblemနာအခြေပြုလေ့လာမှုကိုအများအားဖြင့်အလေးထားသည်။
တက္ကသိုလ်များသည်ကျောင်းသားများအတွက်၎င်းတို့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ရန်ကူညီခြင်း၊ အထူးကျောင်းသားများရက်သတ္တပတ်စီစဉ်ခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါကတစ်နှစ်ပတ်လုံးအခြားကျောင်းသား ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသောကြောင့်ကျောင်းသားများအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်သည်။
သင်ကြားခြင်း သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်များကကောက်ခံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးအချို့ရှိပါသည်။ သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်အများစုမှတစ်နှစ်ငှားရမ်းခမှာ ၂၇၀၀၀ AUD ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်သည် လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်၊ အစားအစာ၊ ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အခြားလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများစသည့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များအားလုံးအတွက်တစ်လလျှင် AUD ၁၄၀၀ မှ ၂၅၀၀ အကြားလိုအပ်သည်။
ကျောင်းသားများသည်တက္ကသိုလ်အနီးရှိတိုက်ခန်း ၇၅၀ မှ ၁,၇၀၀ AUD နှုန်းဖြင့်ငှားရမ်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကတစ်ခန်းတည်းကိုသာငှားရမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတစ်လလျှင် ၃၈၀ မှ ၈၅၀ AUD သို့လျှော့ချနိုင်သည်။
ဒေသခံစူပါမားကက်များမှ ၀ ယ်ယူပြီးတစ်လလျှင် AUD ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိကျသင့်လျှင်အစားအသောက်ဆိုင်သည်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသည်။ စျေးသိပ်မကြီးတဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာစားတာဟာစျေးပေါပြီး ၁၈ AUD ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။
သြစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ သြစတြေးလျကျောင်းသားဗီဇာ ကျောင်းသားဗီဇာသြစတြေးလျလျှောက်ထားပါ
အလို့ငှာ သြစတြေးလျလေ့လာမှု, ကျောင်းသားလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် သြစတြေးလျကျောင်းသားဗီဇာ။ ကျောင်းသားသည်သင်လိုအပ်သောသော့ချက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းပြည်ထဲရေးဌာနသို့သက်သေပြနိုင်သင့်သည် သြစတြေးလျကျောင်းသားဗီဇာ လိုအပ်ချက်များ:
စစ်မှန်သောယာယီ Entrant (GTE) လိုအပ်ချက်
ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းမပြုမီကျောင်းသားသည်ကျောင်းသားများကိုကျောင်းသားများလက်ခံကြောင်းအတည်ပြုသည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုဓနသဟာယသင်တန်းများအဖွဲ့အစည်းများ၏မှတ်ပုံတင် (CRICOS) တွင်တင်သွင်းသည်။
များသောအားဖြင့်ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်လွှာသည်လေးပတ်ကြာသည်။ သို့သော်ကျောင်းသားကလျှောက်ထားလျှင် သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့သင်တန်း ၎င်းသည် ၁၀ လထက် ပို၍ ကြာပြီးသြစတြေးလျပညာသင်နှစ်အဆုံးတွင်ပြီးဆုံးလျှင်ကျောင်းသားဗီဇာကိုနောက်နှစ်မတ်လ ၁၅ အထိသက်တမ်းတိုးသည်။
သြစတြေးလျားရှိကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် သြစတြေးလျားရှိကျောင်းသားဗီဇာအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် သြစတြေးလျားနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
သြစတြေးလျသည်ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များအတွက်အလွန်တရာ ၀ ယ်လိုအားရှိပြီးပြောင်းရွှေ့လာသောလူများကိုရှာဖွေသည်။ ၂၀၁၀-၂၀၁၀ တွင်သြစတြေးလျနိုင်ငံသားဗီဇာရရှိထားသည့်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဖလှယ်မှုပေါင်း ၁၉၀,၀၀၀ ကျော်နှင့် ၂၀၂၀-၂၁ ခုနှစ်တို့တွင်ယာယီယာယီနေရာအနှံ့အပြား ၁၉၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလ ၂၆ ရက်မတိုင်မီတွင်၊ သြစတြေးလျသို့ဗီဇာ အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုချက်အတွက်သီးခြားစီလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလ ၂၆ ရက်အထိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများသည်ရနိုင်သည် အလုပ်လုပ်ခွင့် သူတို့ရဲ့ဗီဇာထောက်ပံ့ကြေးနှင့်အတူ။
ဘွဲ့တစ်ခုရရှိထားသောကျောင်းသားများ သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်2နှစ်အလုပ်ဗီဇာအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီကြသည်။ သြစတြေးလျမှမဟာဘွဲ့ရရှိထားသည့်ကျောင်းသားများသည် ၂ နှစ်သက်တမ်းဗီဇာနှင့်ကျောင်းသားများရရှိရန်အရည်အချင်းပြည့်မီပါသည် သြစတြေးလျမှပါရဂူဘွဲ့ (၃) နှစ်ဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်သည်။
သို့ သြစတြေးလျတွင်လျှောက်ထားပါ တက္ကသိုလ်၊ ကျောင်းသားများသည်တက္ကသိုလ်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသက်သေပြရန်သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများရှိသင့်သည်။ စိတ် ၀ င်စားသည့်တက္ကသိုလ်၏လျှောက်လွှာပုံစံကိုစနစ်တကျဖြည့်စွက်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ အခြားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်များသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ယခင်အရည်အချင်းများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလိုအပ်သည်။
အပိုဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများအချို့အားဖြင့်မေးမြန်းနိုင်ပါသည် သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်များ သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်။ ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများသည်လုပ်သင့်သည် အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုကိုသက်သေပြပါ IELTS, TOEFL သို့မဟုတ် C1 အဆင့်မြင့်ဘာသာစကားလက်မှတ်များပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ရမှတ်များသည်သတ်မှတ်ထားသည့်နိမ့်ဆုံးဘာသာစကားရသင့်သည် သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်များ.
သြစတြေးလျတွင်ရှိသောပညာရေး | ငါတို့တစ်နေရာတည်း သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကျောင်းသားများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း သြစတြေးလျတက္ကသိုလ် နှင့်အခြား 105 နိုင်ငံများ သြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအဓိကအားဖြင့် မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ပါ့အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဆစ်ဒနီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ အထောက်အပံ့ပေးသောနိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံ သြစတြေးလျလေ့လာမှု ဖုံးလွှမ်းထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခု၊ သြစတြေးလျတွင်ရှိသောပညာရေးအပါအဝင် မဲလ်ဘုန်းမြို့ပညာရေး | ဘရစ္စဘိန်း၌ပညာရေး | ပါ့သ်ပညာရေး | ဆစ်ဒနီရှိပညာရေး ).
စျေးသက်သာသောစိတ်ကြိုက်ပညာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ များအတွက်ကျောင်းသားများအတွက်သြစတြေးလျအတွက် သြစတြေးလျရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များ, နိုင်ငံရပ်ခြားရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များ, သြစတြေးလျတွင်ထိပ်တန်းသင်တန်းများ, သြစတြေးလျရှိထိပ်တန်း MBA ကောလိပ်များ, သြစတြေးလျရှိထိပ်တန်း MS ကောလိပ်များ, သြစတြေးလျရှိထိပ်တန်း UG စီးပွားရေးကျောင်းများ, သြစတြေးလျရှိထိပ်တန်း MBBS ကောလိပ်များ နှင့်သြစတြေးလျ၌များစွာသောပိုပြီးသင်တန်းများ။
ငါတို့နိုင်ငံရပ်ခြား ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ၊ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ နိုင်ငံခြားပညာရေး သြစတြေးလျမှအတိုင်ပင်ခံ, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျမှာ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ၌တည်၏။
Australiaစတြေးလျတွင်ပညာသင်ကြားခြင်း * ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများအတွက်အားမပေးပါ အခမဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျတက္ကသိုလ် နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျကို နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျနှင့် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ
စျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးမှုကိုမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ | ဘရစ္စဘိန်းရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | ပါ့သ်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးမှု | ဆစ်ဒနီရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | စျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးမှုကိုမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ | ဘရစ္စဘိန်းရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | ပါ့သ်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးမှု | ဆစ်ဒနီရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ
ကျောင်းသားတိုင်ပင်ဆွေးနွေး - ပညာရေးသြစတြေးလျ
ပညာရေးအတွက်စီစဉ် သြစတြေးလျမှာ တက္ကသိုလ်များအတွက်ဝင်ခွင့် သြစတြေးလျ
သင်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ဘယ်သူလိုအပ်တယ် အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ ဘို့ ၾသစေတးလ်ဘယ်လိုလုပ် ဝန်ခံချက်ရ in ၾသစေတးလ် in သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်များ ဘို့ သြစတြေးလျတွင်ရှိသောပညာရေး သို့မဟုတ် သြစတြေးလျမှာပညာသင်ပါ, မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ မဲလ်ဘုန်းမြို့ပညာရေး သို့မဟုတ် မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာလေ့လာပါ, ဘရစ္စဘိန်းရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ဘရစ္စဘိန်းပညာရေး သို့မဟုတ် ဘရစ္စဘိန်းမှာလေ့လာပါ, ပါ့သ်ရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ပါ့သ်ပညာရေး သို့မဟုတ် ပါ့သ်တွင်လေ့လာသည်, ဆစ်ဒနီရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ဆစ်ဒနီရှိပညာရေး သို့မဟုတ် ဆစ်ဒနီမြို့တွင်လေ့လာသည် ကျနော်တို့အပါအဝင်သြစတြေးလျအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံယူ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဘရစ္စဘိန်းရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ပါ့သတွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဆစ်ဒနီရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးပြုနှင့်မိတ်ဖက်စုံလင်အတွက် သြစတြေးလျတွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအဓိကအားဖြင့် မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဘရစ္စဘိန်းအတွက်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ပါ့အတွက်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဆစ်ဒနီတွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် သြစတြေးလျတွင်အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များ အပါအဝင်သြစတြေးလျတွင်လေ့လာရန် မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိတက္ကသိုလ်များ , ဘရစ္စဘိန်းရှိတက္ကသိုလ်များ , ပါ့သ်ရှိတက္ကသိုလ်များ , ဆစ်ဒနီရှိတက္ကသိုလ်များ နှင့်လည်းအတွက်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့်အတူ 106 နိုင်ငံများ ထောက်ပံ့ရန် သြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့ရန်မြို့ကြီး ၃၂၆ ရှိနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များအပါအ ၀ င်သြစတြေးလျအတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , ပါ့အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , ဆစ်ဒနီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့်မဲလ်ဘုန်းအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသား ၃၂၆ မြို့၊ ဘရစ္စဘိန်းအတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊ ပါ့သ်အတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊
သြစတြေးလျအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် သြစတြေးလျရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် အပါအဝင် မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်စရိတ်, ဘရစ္စဘိန်းအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ဘရစ္စဘိန်းရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ပါ့သ်အတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ပါ့သ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ဆစ်ဒနီအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ဆစ်ဒနီရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည် သြစတြေးလျတွင်ရှိသောပညာရေး နှင့်အကြောင်းပြချက် သြစတြေးလျကိုလေ့လာရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းနှင့်သင်ဆက်သွယ်မည် သြစတြေးလျရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ထို့အပြင်ဆိတ်ကွယ်ရာအခြားနိုင်ငံများအကြံပြုအပ်ပါသည် <="" p="">
သင်၏သြစတြေးလျ၌ပညာသင်ကြားရန်သင်လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျတွင်ကျောင်းသားဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှသင်ကိုပို့ဆောင်လိမ့်မည် ဗီဇာ သြစတြေးလျ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် သြစတြေးလျအတွက်၊ သြစတြေးလျတွင်ဝင်ခွင့်ကိုရယူပါ in သြစတြေးလျတက္ကသိုလ် သို့ သြစတြေးလျမှာပညာသင်ပါ ဘို့ သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပညာရေး, ဝင်ခွင့် Melbourne in မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်တက္ကသိုလ် သို့ မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာလေ့လာပါ ဘို့ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် ဘရစ္စဘိန်း in ဘရစ္စဘိန်းတက္ကသိုလ် သို့ ဘရစ္စဘိန်းမှာလေ့လာပါ ဘို့ ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် Perth in ပါ့သ်တက္ကသိုလ် သို့ ပါ့သ်တွင်လေ့လာသည် ဘို့ ပါ့သ်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် ဆစ်ဒနီ in ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ် သို့ ဆစ်ဒနီမြို့တွင်လေ့လာသည် ဘို့ ဆစ်ဒနီပညာရေးသင့်အနေဖြင့်အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်။
သင်စီစဉ်ထားလျှင် သြစတြေးလျလေ့လာမှုငါတို့၏ ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ in ၾသစေတးလ် သင့်အတွက်လမ်းပြပေးပါလိမ့်မယ် သြစတြေးလျတွင်ဝန်ခံချက် သြစတြေးလျမှာပညာသင်ဖို့အတွက်သူတို့မှာလည်းအတွေ့အကြုံတွေရှိကြတယ် အတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ် ၾသစေတးလ် အပါအဝင် မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ဘရစ္စဘိန်းရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ပါ့သ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဆစ်ဒနီရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပါအဝင် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် တွဲဖက် ၾသစေတးလ် မင်းကိုကူညီနိုင်တယ် တိုက်ခန်းရှာခြင်း or ဘော်ဒါဆောင် ငှားရန်ရှိသည် ၾသစေတးလ်.
ကျွန်တော်တို့၏ သြစတြေးလျရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သင့်တော်တဲ့အရာကိုရှာတွေ့နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ် တက္ကသိုလ် သြစတြေးလျ၌တည်၏။
ငါတို့အသင်း သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပညာရေး သင်လိုအပ်ကောင်းကူညီနိုင်မည့်မည်သည့်အထောက်အပံ့ကိုမဆိုသင့်အားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည် သြစတြေးလျမှာပညာသင်ပါသင်ချွေတာရန်အတွက်အချိန်နှင့်ကုန်ကျမှု သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပညာရေး။
အောင်မြင်သည် အတွက်ဝင်ခွင့် ၾသစေတးလ် အတွက်လေ့လာနေသည် ၾသစေတးလ်မြို့များဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည် မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ဝင်ခွင့် ဘို့ မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာလေ့လာနေ, ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ဝင်ခွင့် ဘို့ ဘရစ္စဘိန်းမှာလေ့လာနေ, ပါ့သ်တွင် ၀ င်ခွင့် ဘို့ ပါ့သ်တွင်လေ့လာသည်, ဆစ်ဒနီရှိဝန်ခံချက် ဘို့ ဆစ်ဒနီမှာလေ့လာနေ
ရန်စီစဉ်လျှင် သြစတြေးလျလေ့လာမှုထို့နောက်ရွေးစရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည် သြစတြေးလျမှမိတ်ဖက် သြစတြေးလျား၌သင် ၀ င်ခွင့်အတွက်၊ ထုတ်လုပ်သူသန်း သင်၏အစီအစဉ်များအောင်မြင်ရန်သေချာစေရန်အသင့်ဖြစ်နေသည် လေ့လာချက် သြစတြေးလျသို့
သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်၏အဖွဲ့ သြစတြေးလျရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ သင့်အတွက်သတင်းပို့ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင့်အားပေးပို့ပါလိမ့်မည် သြစတြေးလျတွင်ရှိသောပညာရေးအပါအဝင် ကျောင်းသားဗီဇာ သြစတြေးလျအတွက် သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် သင်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီသြစတြေးလျတွင်ရှိသောအသုံးစရိတ်များကိုကြိုတင်နားလည်ထားရန် သြစတြေးလျတက္ကသိုလ် လေ့လာရန်သို့မဟုတ် နောက်ထပ်တိုင်းပြည် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပိုကောင်းလိမ့်မယ် အခြားတိုင်းပြည်များကိုစစ်ဆေးပါ, အစား, ၾသစေတးလ်
ကူညီပေးပါ စာရွက်စာတမ်းများ ဘို့ သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်အတွက်ဝန်ခံချက်.
ကြီးကြပ်သည် သင့်အတွက်ဖြစ်စဉ် သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်အတွက်ဝန်ခံချက်.
မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်လေ့လာပါ | Study in Brisbane | ပါ့သ်တွင်လေ့လာပါ | ဆစ်ဒနီမှာလေ့လာပါ
သြစတြေးလျနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၅ နိုင်ငံအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးမိတ်ဖက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုရရှိရန်ကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျားရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များနှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်အိမ်တစ်လုံးအောက်၌ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအားအမြဲတမ်းအကြောင်းကြားပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျားအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များအတွက်ကျောင်းသားများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်choစတြေးလျနိုင်ငံအတွက်သင့်ကို ၀ င်ခွင့်ရရန်ခွင့်ပြုလျှင်၊
သြစတြေးလျရှိအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များသည်သြစတြေးလျတွင်ပညာသင်ကြားရန်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများဖြင့် ၀ ယ်ယူထားသည်။
သင်၏သြစတြေးလျား၌သြစတြေးလျ၌ပညာသင်ရန်အတွက် ၁ ချက်ဆက်သွယ်မှုကိုရိုးရှင်းအောင်ကျွန်ုပ်တို့ဤတွင်ရောက်ရှိနေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျအတွက်သင်၏ပညာရေးရည်မှန်းချက်အတွက်ပူးပေါင်းပါကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုရရှိသည် သြစတြေးလျမှ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအပါအဝင် မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဘရစ္စဘိန်းရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ပါ့သ်ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဆစ်ဒနီရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အထောက်အပံ့ပေးသောနိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံ သြစတြေးလျမှာပညာသင်ပါ မင်းကိုသြစတြေးလျကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါပထမ ၃ လအတွက်သင့်ကိုခွဲဝေပေးလိမ့်မယ်။ သြစတြေးလျားအတွက်သင့်အတွက်အဆက်အသွယ်တစ်ခုဖြစ်မည့်သြစတြေးလျအတွက်သင်၏ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်၊ သြစတြေးလျရှိအဆောင် / တိုက်ခန်း၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်အတွက် သြစတြေးလျနိုင်ငံသားအားလုံးကသင့်ကိုနားလည်ပြီးသြစတြေးလျားရှိအချိန်၊
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ကိုလိုက်ရှာသည် သြစတြေးလျတွင်ဝန်ခံချက်တစ်ဦးအတွက် တက္ကသိုလ် or သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ကောလိပ်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာ သြစတြေးလျမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, အထူးထောက်ခံမှုပေးနိုင်ပါသည်။
Australiaစတြေးလျတွင်သင် ၀ င်ခွင့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှု
သြစတြေးလျားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၅ နိုင်ငံမှသင်တို့၏အခြားတက္ကသိုလ်များကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
Stopစတြေးလျနိုင်ငံတွင် One Stop Shop နှင့်ပညာရေးအတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခု
သြစတြေးလျရှိနိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားများအတွက်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ။ အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးထွက် Out ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သြစတြေးလျားရှိကျွန်ုပ်တို့၏လိုက်နာကျင့်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့သည်ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်သြစတြေးလျတွင်သင်လိုအပ်သည့်မည်သည့်အထောက်အပံ့မဆိုသင့်လျော်စွာလုံ့လဝီရိယရှိရှိကျွမ်းကျင်မှုများစွာရှိသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - သြစတြေးလျသို့ပညာရေး
သြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ သြစတြေးလျမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်သြစတြေးလျမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံများကသြစတြေးလျတက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်အတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုဘယ်လိုပေးသလဲ။
သြစတြေးလျ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံကထောက်ပံ့ပေး ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံသြစတြေးလျလည်းအဖြစ်လူသိများ ပြည်ပမှာသြစတြေးလျ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံခြားသြစတြေးလျ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျ၏နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျ၏နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျ၏နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ forစတြေးလျ၏ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ studyစတြေးလျ၏လေ့လာမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ သြစတြေးလျ၏နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ forစတြေးလျ၏ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ သြစတြေးလျ၏အတိုင်ပင်ခံ။
ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်ရရန် visaစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားပါ, ဘယ်လိုရရန် သြစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ , သြစတြေးလျ ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်လျှောက်ထားပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ရယူရန် သြစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဘယ်လိုရရန် သြစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, သြစတြေးလျ ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်, သြစတြေးလျကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ, သြစတြေးလျကျောင်းသားဗီဇာထုတ်ယူခြင်းအချိန်။ ပြောပါ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ သြစတြေးလျ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံရပ်ခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်း, မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ , မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံများ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘရစ္စဘိန်းအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Brisbane ရှိပြည်ပရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘရစ္စဘိန်းအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဘရစ္စဘိန်းနိုင်ငံရပ်ခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဘရစ္စဘိန်းအတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ ဘရစ်စ်ဘိန်းရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ္စဘိန်းရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှဘရစ္စဘိန်းရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရပ်စ်ဘိန်းရှိပြည်ပတွင်အတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ပါ့သ်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပါ့သတွင်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပါ့သ်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ပါ့အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ပါ့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပါ့သ်တွင်ပြည်ပမှပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပါ့အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပါ့သတွင်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပါ့အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ပါ့သ်ရှိပြည်ပတွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပါ့သ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ပါ့သ်၌အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ ပါ့သ်မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Perth ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Perth ရှိနိုင်ငံခြားမှအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ Perth ရှိနိုင်ငံခြားမှအတိုင်ပင်ခံ၊ Perth ရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့်ပါ့တ်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံများ။ ဆစ်ဒနီအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆစ်ဒနီရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆစ်ဒနီရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဆစ်ဒနီအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဆစ်ဒနီရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံခြားဆစ်ဒနီရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆစ်ဒနီရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆစ်ဒနီရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆစ်ဒနီအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံခြားဆစ်ဒနီရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆစ်ဒနီအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဆစ်ဒနီမြို့တွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ , ဆစ်ဒနီရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆစ်ဒနီရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆစ်ဒနီရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆစ်ဒနီရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆစ်ဒနီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဆစ်ဒနီရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ Australiaစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်ပြောဆိုပါ။ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကမ္ဘာ့ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိလေ့လာမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိနိုင်ငံခြားမှအတိုင်ပင်ခံ၊ ယနေ့မဲလ်ဘုန်းမြို့၌တည်၏။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ Australiaစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်ပြောဆိုပါ။ ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ္စဘိန်းရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ္စဘိန်းရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ္စဘိန်းရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ္စဘိန်းရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ္စဘိန်းရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှဘရစ္စဘိန်းရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ္စဘိန်းရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ္စဘိန်းရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ္စဘိန်းနိုင်ငံ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ်စ်ဘိန်းရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ္စဘိန်းတွင်အတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ္စဘိန်းတွင်လေ့လာမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း၊ ဘရစ္စဘိန်းတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ္စဘိန်းရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ်စ်ဘိန်းရှိပြည်ပရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘရစ္စဘိန်းနိုင်ငံရပ်ခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ယနေ့ဘရစ္စဘိန်း၌တည်၏။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ Australiaစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်ပြောဆိုပါ။ ပါ့သ်မှအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်မှအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်မြို့ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်မှပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်တွင်ရှိသောနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်၏အတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်တွင်အတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်၏အတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်၏အတိုင်ပင်ခံ၊ ပါ့သ်မှနိုင်ငံ့ပညာရေးအကြံပေး၊ ယနေ့ပါ့အတွက်။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ Australiaစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်ပြောဆိုပါ။
ဘာဖြစ်သလဲ LivingAustralia ၏ကုန်ကျစရိတ် or livingစတြေးလျလူနေမှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် , ကျောင်းသားများအတွက်သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင် အိန္ဒိယကျောင်းသားများအတွက်သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ပါကစ္စတန်ကျောင်းသားများအတွက်သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျောင်းသားများအတွက်သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားများအတွက်သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် or အာဖရိကမှကျောင်းသားများအတွက်သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်?
ကျနော်တို့အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ သြစတြေးလျအတွက်လူနေမှုတွက်ချက်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ပါဝင်သည် သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, သြစတြေးလျ၏လူနေမှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ်, ကျောင်းသားများအတွက်သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အလွန်အခြေခံကျသည် သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ၏ကုန်ကျစရိတ်.
မဲလ်ဘုန်းမြို့၏နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် | ဘရစ္စဘိန်းနေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ် | ပါ့သ်တွင်နေထိုင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | ဆစ်ဒနီတွင်နေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ် | နေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် | ဘရစ္စဘိန်းရှိလူနေမှုကုန်ကျစရိတ် | Perth တွင်နေထိုင်ရန်တွက်ချက်မှုတန်ဖိုး | ဆစ်ဒနီတွင်နေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်
youစတြေးလျ၊ စီးပွားရေးသြစတြေးလျားတက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ MBA ၀ င်ခွင့်၊ ကောလိပ် ၀ င်ခွင့်သြစတြေးလျ၊ သြစတြေးလျ ၀ င်ခွင့်၊ , မဟာသြစတြေးလျ, မဟာကောလိပ်မှဝင်ခွင့်သြစတြေးလျ, ကောလိပ်ဝင်ခွင့်သြစတြေးလျ ,?
ကျွန်တော်တို့၏ သြစတြေးလျမှအသိအမှတ်ပြုကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အဘို့သင့်လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး သြစတြေးလျတွင်ဝင်ခွင့် သင်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည် သြစတြေးလျတွင်သင်တန်းတက်သည်, သြစတြေးလျ mba ဝန်ခံချက်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်ခံမှုသြစတြေးလျ, သြစတြေးလျမာစတာသင်တန်းဝင်ခွင့်, ကောလိပ်ကျောင်း ၀ င်ခွင့်ကိုသြစတြေးလျကကူညီသည်, သြစတြေးလျ, ဝန်ခံချက်သြစတြေးလျ, သြစတြေးလျဘွဲ့သင်တန်းတက်ရောက်ရန်, MBBS ဝန်ခံချက်သြစတြေးလျ, သြစတြေးလျ, ဝင်ခွင့်Australiaစတြေးလျ, admစတြေးလျတွင်ကောလိပ်ဝင်ခွင့်အထောက်အပံ့, သြစတြေးလျ နှင့် သြစတြေးလျ.
သြစတြေးလျတွင်အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
အလိုလျှင် သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ် ခွင့်ပြု သြစတြေးလျတွင်အွန်လိုင်းဝင်ခွင့် or သြစတြေးလျတွင်အွန်လိုင်းပညာရေး or သြစတြေးလျတွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများထို့နောက် သြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့ဆက်သွယ်ပါ သြစတြေးလျအတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ, သြစတြေးလျအတွက်နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံခြားသြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်သြစတြေးလျရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ
Australiaစတြေးလျတွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများအတွက် ၀ င်ခွင့်အတွက်သြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်ပေးပါသလား။ သြစတြေးလျတွင်အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
အလိုလျှင် သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ် ခွင့်ပြု သြစတြေးလျတွင်အွန်လိုင်းဝင်ခွင့် or သြစတြေးလျတွင်အွန်လိုင်းပညာရေး or သြစတြေးလျတွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများထို့နောက် သြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့နိုင်လိမ့်မည်။ "
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ဘရစ္စဘိန်းရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ပါ့သ်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ဆစ်ဒနီရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း | ဘရစ္စဘိန်း၌အွန်လိုင်းသင်တန်း | ပါ့သ်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်း | ဆစ်ဒနီရှိအွန်လိုင်းသင်တန်း
ကျွန်ုပ်သည်“ သြစတြေးလျားပညာရေးဌာနနှင့်သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင်ပညာသင်ရန်သြစတြေးလျပညာရေးဌာန” ကိုဆက်သွယ်သင့်ပါသလား။
ဘို့ ဝင်ခွင့်ပေးခြင်း တစ်ဦးအတွက် သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်, သြစတြေးလျပညာရေး ဦး စီးဌာန or သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန များအတွက်အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးပါသည် သြစတြေးလျရှိနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက် ၀ င်ခွင့်, သြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကက သြစတြေးလျရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းပေးလိမ့်မည် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင်ပညာသင်ပါ or သြစတြေးလျတွင်ပညာသင်ပါ။ ဒါ့အပြင်၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုကြည့်ပါ ပညာရေးဦးစီးဌာန, သြစတြေးလျ / ၏ဝက်ဘ်ဆိုက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသြစတြေးလျ။
မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်လေ့လာပါ | ဘရစ္စဘိန်း၌လေ့လာပါ | ပါ့သ်တွင်လေ့လာပါ | ဆစ်ဒနီမှာလေ့လာပါ | မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | ဘရစ်စ်ဘိန်း၌နိုင်ငံခြားသို့ပညာသင်ပါ | ပါ့သ်တွင်ကျောင်းတက်သည် | ဆစ်ဒနီမြို့တွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ
သြစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ သြစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာမည်ကဲ့သို့လျှောက်ရမည်နည်း။ သြစတြေးလျကျောင်းသားဗီဇာစည်းကမ်းချက်များ၊ Australiaစတြေးလျကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်၊
လျှောက်ထားရန်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန် သြစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဘယ်လိုရရန် သြစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, သြစတြေးလျကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်, သြစတြေးလျကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ, သြစတြေးလျကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲနဲ့ အချိန်အဆက်အသွယ် သြစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ.
ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းသား၏သြစတြေးလျ၏အလုပ်လုပ်ခွင့် (သို့) ကျောင်းသားဗီဇာအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
ကျနော်တို့များအတွက်စည်းမျဉ်းများစာရင်းပြုစုပါပြီ သြစတြေးလျားရှိကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် အပေါ်က သြစတြေးလျကျောင်းသားအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် or သြစတြေးလျကျောင်းသားဗီဇာဝန်ခံချက်အပြီးအလုပ်ပါမစ် သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်။ အဖြစ်လူသိများ, သြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျအတွက်နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်သြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, education consultant in Australia, education consultancy in Australia, foreign education consultants in Australia, study abroad consultants in Australia, abroad education consultant in Australia, student consultant for Australia, education Consultancy in Australia, study consultancy in Australia, abroad education consultants in Australia, educational consultancy in Australia, global educational consultants in Australia, education consultant in Melbourne, educational consultancy in Melbourne, educational consultant in Melbourne, foreign education consultants in Melbourne, student consultants for Melbourne, abroad education consultant in Melbourne, overseas educational consultants in Melbourne, university consultancy in Melbourne, student Consultants in Melbourne, abroad education consultants in Melbourne, education consultancy in Melbourne, foreign education consultancy in Melbourne, study consultancy in Melbourne, educational Consultants in Melbourne, study abroad consultants in Melbourne, abroad education consultants in Melbourne, global educational consultants in Melbourne, education consultants in Melbourne, student consultant for Melbourne, educational consultancy in Melbourne education consultant in Brisbane, educational consultancy in Brisbane, educational consultant in Brisbane, foreign education consultants in Brisbane, student consultants for Brisbane, abroad education consultant in Brisbane, overseas educational consultants in Brisbane, university consultancy in Brisbane, student Consultants in Brisbane, abroad education consultants in Brisbane, education consultancy in Brisbane, foreign education consultancy in Brisbane, study consultancy in Brisbane, educational Consultants in Brisbane, study abroad consultants in Brisbane, abroad education consultants in Brisbane, global educational consultants in Brisbane, education consultants in Brisbane, student consultant for Brisbane, educational consultancy in Brisbane education consultant in Perth, educational consultancy in Perth, educational consultant in Perth, foreign education consultants in Perth, student consultants for Perth, abroad education consultant in Perth, overseas educational consultants in Perth, university consultancy in Perth, student Consultants in Perth, abroad education consultants in Perth, education consultancy in Perth, foreign education consultancy in Perth, study consultancy in Perth, educational Consultants in Perth, study abroad consultants in Perth, abroad education consultants in Perth, global educational consultants in Perth, education consultants in Perth, student consultant for Perth, educational consultancy in Perth education consultant in Sydney, educational consultancy in Sydney, educational consultant in Sydney, foreign education consultants in Sydney, student consultants for Sydney, abroad education consultant in Sydney, overseas educational consultants in Sydney, university consultancy in Sydney, student Consultants in Sydney, abroad education consultants in Sydney, education consultancy in Sydney, foreign education consultancy in Sydney, study consultancy in Sydney, educational Consultants in Sydney, study abroad consultants in Sydney, abroad education consultants in Sydney, global educational consultants in Sydney, education consultants in Sydney, student consultant for Sydney, educational consultancy in Sydney . သြစတြေးလျတွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ.
သြစတြေးလျားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်သြစတြေးလျမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံများအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ or မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘရစ္စဘိန်းအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or ဘရစ္စဘိန်းရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ပါ့အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or ပါ့သ်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဆစ်ဒနီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or ဆစ်ဒနီရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ?
ဤရွေ့ကားများအတွက်အသုံးပြုကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည် သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံအခြားအသုံးအနှုန်းများမှာ သြစတြေးလျအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျအတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ, သြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျအတွက်နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, သြစတြေးလျအတွက်တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်သြစတြေးလျရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်သြစတြေးလျအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ
၀ င်ခွင့်အတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ ၾသစေတးလ်
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ဘရစ္စဘိန်းတက္ကသိုလ်မှ ၀ င်ခွင့် ပါ့သ်တက္ကသိုလ်မှ ၀ င်ခွင့် ဆစ်ဒနီရှိတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်
သြစတြေးလျ Securities Exchange
ရှေ့နေချုပ် ဦး စီးဌာန
စက်မှု, တီထွင်မှုနှင့်သိပ္ပံ ဦး စီးဌာန
Didgeridoo ယဉ်ကျေးမှုအချက်အချာ | သြစတြေးလျ iDIDJ
Blue Mountains ဟိုတယ်ကျောင်း
ဗဟို Queensland ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်
ချားလ်စ် Sturt University က
Edith Cowan University က
တောင်သြစတြေးလျ၏ Flinders တက္ကသိုလ်
မြောက် Queensland ပြည်နယ်၏ဂျိမ်းစ်ကွတ်တက္ကသိုလ်
la Trobe University က
Marcus Oldham ကောလိပ်
Murdoch University မှ
နည်းပညာတက္ကသိုလ် Queensland ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်
နည်းပညာတက္ကသိုလ်တော်ဝင်မဲလ်ဘုန်းမြို့ Institute က
New South Wales တက္ကသိုလ်
Notre Dame သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်
တောင်ပိုင်း Queensland ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်
အဆိုပါ Sunshine ရုပ်ရှင်ကမ်းခြေတက္ကသိုလ်
Imp ။ အင်ဖို - ကျွန်ုပ်တို့သည်လင့်ခ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ပညာရေးဌာနသြစတြေးလျ / ပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ မည်သည့်တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှုသည်။